Shira wayyaaneen Magaala Debre Birhan tti hojjechaa jirtu fi Dararaa Oromota naannoo Beenishaangul Gumuz | QEERROO
Posted on November 16, 2017 by Qeerroo
Abdii Lammii irraa
Yeroo ammaa magaalaa Debre Birhaan , shawaa kaabaa tti ji’a lamaan darbe kana keessa namoota 20 oltu halkan morma qalanii ajjeesaa turan. Ajjeechaa akkasii kan raawwachaa ture wallaalamee tureera. Gochaan akkasii magaala sana keesatti yeroo yerootti dabalaa waan dhufeef jirraattonni magaala sanaa waan godhan wallaalanii ture. Garuu guyyaa 11/13/2017 namoota dhalootaan Oromoo ta’an sadii fidanii uummatattii argisiisaa turani. Isaanis bakka Mandiidaa jedhamuu dhufnee ajajaan keenya Finfinnee jira, ergama ABO raawwachuu dhufne. Nagaa naannichaa jeequu fi saboota Amaaraa fixuuf ajaja fudhannee dhufne jedhanii dubbachaa turan. Guyyaa 40f waraana bilisummaa oromoo (WBO) biratti leenjii fudhannee dhufne jedhani uummata fuulduratti xibaaraa oolani. Anillee bakka sanatti argamee dhagaheera. Shirri kun diina keenya wayyaaneedhaan xaxamaa akka jiru beekamaadha. Hala deema jiru akan ariitiin uummataaf karaa adda addaa yoo hubannaa gad fageenyaan taasisame malee uummanni Oromoo lakkoofsa baay’eetu magaalicha keessa jiraata waan ta’eef ummata nagana jireenya isaa jiraaturratti akka miidhaan hin geenye yaaddoon guddaatu jira.
Uummata Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz jiraatan irratti daraaraan cimee itti fufee jira.
Akkuma beekamu Sabboontonni Oromoo naannoo Matakkal jiraatan Oromummaa isaaniitiin qofa yakkamanii waggaa darbe Muddee 2016 irraa jalqabee lafa nagana jiraata irraa human tikaa Wayyaaneen qabamanii Mana hidhaa Maayikalaawwii fi Qiliinxoo keessatti dararamaa jiru. Himata Shororkeessummaan iraatti banamee ragaa jiraattota naannoo Sanaa fidanna jechuun, Oromootaa fi saboota biroo naannichaa ragaa godhachuuf yaalii gochaa turtes namootiin ragaa ta’uuf dirqamanis ta’e fedhaan argaman aantummaa fi jaalala Uummata Oromoo naannichaaf qaban Mana murtii Olaanaa dhaddacha 19ffaa irraatti Mul’isaniiru. Kunis mootummaa nama nyaataa wayyaanee mata dhukkubbii itti ta’ee jira. Kanumaan wal qabatee Beellama itti aanuuf namoota ragaa haa ta’an jedhanii Namoota kudha lama naannichaa lafa jiranii waamanii kadhachaa akka jiran beekameera.
Haaluma wal fakkaatuun Naannoodhuma Beenishaangul Gumuz, Godina Kaamaash, Ganda Yaasoo keessatti gaafa 9/11/2017 Sabboontota Oromoo toorba human tikaa wayyaaneen ukkaamfamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Isaan keessaas namni tokko dhalataa Matakkal ta’uun Bira gahameera. Kunis sababaa basaastuun wayyaanee dambi doollootti tarkaanfiin irratti fudhatameefi.
Karaa biraan immoo Godina matakkal bakk Gilgel Beles jedhamutti piresidaantii Yuuniversiitii Asoosaa kan ta’e Dr. Amsalu Bedemo wal gahii Ummata Shinaashaa qofa waamuun marii shiraan guutame godheera. Kunis Uummanni Oromoo fi Amaaraa bittaa isa durii nutti fiduuf jedhu kanaaf ofirraa balleessuu qabna jedhee uummata kakaasaa tureera. Akkuma seenaarratti beeknu jalqaba bara 1980 fi jalqaba bara 1990 A.L.H ttii magaalaa Paawwii fi magaalota Beenishaangul gumuz biroottii duguuggaan sanyii Uummata Amaaraa irratti godhamee ture. Ammas Dr Amsaaluun maree godhan irratti Uummanni shinaashaa tarkaanfii saba Amaaraarratti fudhataa ture yaadachiisuun ammallee Saba Amaaraa lafa isaaniirra jiru balleessuu akka qabanii fi deeggarsa barbaachisus akka argachuu danda’ani himeera. Yaada isaanii kanas “Amaaraan Ammaarroo maaxifat alebin” jechuun ibseera.
Haaluma wal fakkaatuun Dr. Amsaaluun wal gahii sanarratti Dhalattoonni Oromoo rakkoo nurratti uumuu danda’ani hin jiran amma mana hidhaa galaniiru jedhee dhaadataa tureera. Wal gahicha boodas waraqaa shororkeessaa “ Amma yeroon kan Oromoo fi kan ABO ti” kan jedhu qubee afaan Oromoon barreeffamee magaaloto Bulen, Barbar, Gilgel belesii fi kanneen biroo keessatti amsaasuun dhalattoota Oromoo naannichaa ittiin goolaa jiraachuunis bira gahameera. Kanas humni tikaa Wayyaanee magaalotaa fi gandoota kanaa eenyu kan kana godhe baasaa jechuun Uummata nagana jiraataa jiru rakkisaa jiru.
Dr Amsaaluun dura barsiisaa yuuniversiitii Wallaggaa kan ture, qubee afaan Oromoo sirriitti barreessee dubbisuu kandanda’u, kan dubbatuu fi yeroo achi keessa turettis barattoota Oromoo yuuniversiitii Wallaggaa shanii ol kan ta’ani ajjeesisee fi hedduu immoo mana hidhaatti kan guursisaa ture ta’uun isaa kan beekame dha. Hojii isaa Kanaan Guddinaa fi kabaja Mootummaa wayyaanee irraa argachuun yeroo ammaa presidaantii yuuniversiitii Asoosaa ta’eera. Ammas Yuuniversiitii Asoosaa keessatti hojii wal fakkaatu hojjechaa jiraachuunis raggaasifameera.
Walumaa galatti Mootummaan nama nyaataa wayyaanee hacuuccaa fi duguuggaan sanyii uummata Oromoo Naannoo Beenishaangul Gumuz irratti fudhachaa jiru cimee itti fufee jira. Kanaafiyyuu nuti dhalattoonni Oromoo naannichaa Uummata Shinaashaa, Bartaa, Gumzii, Maa’oo, Koomoofi kannee biroo shira mootummaan tokkummaa Uummataa diiguuf fayyadamaa jiru hubatee Akkuma amma gochaa jiran Uummata Oromoo Cinaa akka dhaabbatan waamicha goona.
Akkasumas Uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan rakkoo yeroo ammaa uummata Oromoo naannichaa irra gahaa jiruuf akka nuuf dirmattan waamicha goona.